I-Cast igqityiwe nge-Apple TV + kwiintsuku zokugqibela zePtlomey Grey Miniseries | Ndisuka mac
NgoDisemba ophelileyo, sathetha ngolunye uthotho olulandelayo oluza kufika kwinkonzo yokusasaza ividiyo ka-Apple. Sithetha ngothotho Iintsuku Zokugqibela zePtlomey Grey, uthotho ophambili ophambili kuzakuba nguSamuel L. Jackson Uthatha inxaxheba yakhe yesibini kwiprojekthi yeApple TV + emva kweBhanki.
Emva kweenyanga ezininzi ngaphandle kokufumana iindaba ngale projekthi, namhlanje sivuka ngeendaba ngokubhekisele kubalingisi kolu ngcelele, uthotho olongeze izongezo ezi-5, ngaloo ndlela kugqitywa owona mlingisi uphambili ophambili kolu ngcelele, uthotho olwamkela inoveli engaziwayo ngoWalter Moseley.
Ngokukahluka, ukubonwa kwabaphathiswa Iintsuku Zokugqibela zePtlomey Grey yandiswa nge:
UWalton Goggins (Ulungelelaniso)
UOmar Miller (Amabhola)
UMarsha Stephanie Blake (Ndingumfazi wakho)
UDamon GuptonUmbane oMnyama)
UCynthia Kaye McWilliams (Coyote)
UWalton Goggins kunye no-Omar Miller basebenza kunye kumdlalo weqonga we-CBS Unicorn. Le miniseries kukudibana kwakhona phakathi kukaWalton Goggins noSamuel L. Jackson emva ube yinxalenye yabalingisi befilimu Intiyo ezisibhozo (Inzondo lesibhozo) eyalelwe nguQuentin Tarantino.
USamuel L. Jackson Udlala uPtolemy Grey, indoda eneminyaka engama-91 ubudala enesifo sengqondo esixhalabisayo. Grey unethuba lokubuyisa iinkumbulo zakhe ngokufutshane kwaye asebenzise elo xesha lixabisekileyo ukusombulula ukusweleka komtshana wakhe kwaye adibanise nexesha lakhe elidlulileyo kunye nosapho.
Njengoko kuchaziwe ngokwahluka, UWalton Goggins izakudlala uGqirha Rubin, ngelixa UMarsha stephanie blake Uya kudlala uNiecie, umama womtshana kaGrey. UDamon Gupton Uya kudlala umcebisi kaGrey wobuntwana, uCoydog, kunye UCynthia Kaye McWilliams Kumfazi wesibini kaGrey, uSensia. Ummiller uOmar Uya kudlala uReggie Llyod, umtshana kaGrey.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iintsuku zokugqibela zePtlomey Grey miniseries ezenzelwe iApple TV + igqityiwe
Windows 10 iya kubonelela ngomgangatho ophuculweyo weaudiPods, iTunes kunye neApple Music